खोकीसँगै ज्वरो आउनु नै निमोनिया हो – indepth.com.np
खोकीसँगै ज्वरो आउनु नै निमोनिया हो
२७ पुष २०७५, शुक्रबार २२:१८
छातीरोग विशेषज्ञ डा. नवीनप्रकाश शाह
चिसोबाट बच्न खोप पनि लगाउन सकिन्छ
काठमाडौं उपत्यकामा चिसो लगातार बढेको बढेयै छ । त्यसमाथि बढी चिसो मानिने माघ महिना आउनै बाँकी छ । चिसोयाममा सर्वसाधारणहरु बिरामी पर्छन् । त्यसमाथि बालबच्चा र ज्येष्ठ नागरिकहरु चिसोमा बढी प्रभावित हुन्छ । त्यसैले उनीहरुको स्वास्थ्यको बढी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । चिसो मौसममा हुनसक्ने सम्भावित स्वास्थ्य समस्याबारे भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित डा. इवामुरा मेमोरियल अस्पतालका वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डा. नवीनप्रकाश शाहसँग इन डेफ्ट मासिकका प्रतिनिधिले गर्नुभएको छोटो कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ । – सं.
जाडोमा छातीसम्बन्धी समस्या बढी देखापर्छ । चिसोबाट बच्न के गर्नुपर्छ ?
– बाहिरी हावा चिसो भएपछि हाम्रो फोक्सोमा पनि चिसो हावा नै जाने हो । हामीले सास फेर्दा फोक्सोसम्म हावा पुगेको हुन्छ । यसरी फोक्सोमा चिसो हावा गएर संक्रमण (इनफेक्सन) हुने, फ्लु हुने हुन्छ । चिसोमा प्रदूषणको कारण हावामा धुँवाधूलो हुन्छ, भाइरसहरु पनि हुन्छन् । यी भाइरसहरु बदलिँदो वातावरणमा सक्रिय हुन्छन् । ती नै भाइरस छातीमा पुगेर संक्रमण गर्ने हो ।
यसबाट बच्न माक्स लगाउनुपर्छ । धुँवाधूलोबाट बच्नुपर्छ । चिसोबाट बच्न बाक्लो लुगाफाटो लगाउनुपर्छ । भीडभाडमा जाँदा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ । अर्को मुख्यगरी चिसोबाट बच्ने खोप (भ्याक्सिन) छ । यो मौसममा फ्लु बढी सक्रिय हुन्छ । यसैबाट इन्फ्लुयन्जा हुने हो । त्यसैले इन्फ्लुयन्जाविरुद्धको खोप लगाउनु उत्तम हुन्छ ।
खोप कतिको विश्वसनीइ छ ?
– खोप एकदम विश्वसनीय र सबै ठाउँमा सहज रुपमा उपलब्ध छ ।
चिसोमा कस्तो अवस्था आउँदा तुरुन्तै चिकित्सककहाँ जँचाउन जानुपर्छ ?
– यो भन्न सजिलो छैन । हेर्दा सामान्य रुघाखोकी लागेको जस्तो हुन्छ तर भित्रभित्रै निमोनियाले खाइसकेको हुन्छ । त्यसैले रुघाखोकीसँग ज्वरो आयो भने तुरुन्तै जँचाउनुपर्ने हुन्छ ।
छाती राम्रो छ वा छैन कसरी थाहा पाउन सकिन्छ ?
– छाती राम्रो भए खोकी लाग्दैन । ज्वरो आउँदैन । अरु स्वास्थ्य समस्या हुँदैन । दम, रुघाखोकी लागिरहेको छ भने बुझ्नुप¥यो, तपाईंको छाती राम्रो छैन । तपाईंलाई छातीको संक्रमण भएको हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा रुघाखोकी र सामान्य ज्वर भनेर घर नबसिरहनुहोस् । तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा गएर जँचाउनुहोस् ।
चिसोमा बालबच्चा र ज्येष्ठ नागरिकहरु बढी पीडित हुन्छन् । यस्तो बेला उहाँहरुको लागि के कस्तो सावधानी अपनाउनुपर्छ ?
– बालबच्चा र ज्येष्ठ नागरिक दुवैको शरीरको रोगसँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमता वयस्कको तुलनामा कमजोर हुन्छ । वयस्कहरुको रोगसँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमता बलियो र राम्रो हुन्छ । त्यसैले कुनै जीवाणु शरीरभित्र गए पनि त्योसँग लड्छ र रोग लाग्न दिँदैन । तर बच्चा र ज्येष्ठ नागरिकहरु रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर भएकै कारण चाँडै रोगले आक्रमण गर्छ र संक्रमण हुन्छ । त्यसैले उहाँहरुले खोक्न थाल्नुभयो र रुघासँगै ज्वर आयो भने तुरुन्तै चिकित्सककहाँ जँचाउनुपर्छ ।
मुख्यतः बालबच्चा र ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई चिसोविरुद्ध र फ्लुविरुद्ध खोप लगाइदिनुपर्छ । बजारमा निमो भ्याक्सिन र फ्लु भ्याक्सिन पाइन्छन् । त्यसबाट बालबच्चा र ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई चिसोले बचाउँछ ।
चिसोमा हुने रोग सम्बन्धमा डा. इवामुरा मेमोरियल अस्पतालमा के के सुविधा छन् ?
– यहाँ चिसोमा हुने रोगसम्बन्धी सबै सेवासुविधा उपलब्ध छन् । छातीका सम्पूर्ण उपचार यहाँ सम्भव छ । छातीका धेरै रोग छन् । जस्तैः सीओपीडी । यो एक्सरेबाट थाहा पाउन सकिन्छ । यो सुविधा इवामुरामा उपलब्ध छ । फोक्सो जाँच गर्ने पीएफटी –एँत्) छ । यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको जाँच इवामुरामै उपलब्ध छ । अन्य उपचार पनि यहीं हुन्छ । औषधि यहीं नै पाइन्छ ।
अक्सिजन, वाइप्याप मेसिन यहाँ उपलब्ध छ । धेरै स्वा स्वा गरेर आउने बिरामीलाई वाइप्याप मेसिन प्रयोग गरेर उपचार गरिन्छ । निमोनिया लागेर आएका बिरामीहरुलाई पनि कुन किसिमको निमोनिया भएको भन्ने थाहा पाउन एक्सरे गर्नुपर्छ । जुन उपचार इवामुरामै भइरहेको छ ।
के साधारण खोकी र निमोनिया भइसकेको खोकी छुट्याउन सकिन्छ ?
– साधारण खोकीमा ज्वरो आउँदैन । मात्र खोकी लागेको हुन्छ । रुघा लागेको हुनसक्छ तर ज्वरो नै आएको छ भने संक्रमण भएर निमोनिया नै भएको सम्भावना बढी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थामा लान ढिलाइ गर्नुहुँदैन । निमोनिया बिग्रियो भने उपचार गा¥हो हुन्छ । बिरामीको मृत्युसम्म हुनसक्छ ।
नेपालीहरुमा धेरै गा¥हो भएपछि मात्रै अस्पताल पुग्ने प्रवृत्ति छ तर निमोनियामा गा¥हो गरी घरमा बस्न हुँदैन । म फेरि पनि जोड दिएर भन्छु, रुघाखोकीसँगै ज्वरो आएको छ भने निमोनिया भइसकेको हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा तुरुन्त जँचाउन जानुपर्छ । जति ढिलो भयो, निमोनियाको उपचार गर्न नसकिने अवस्था आउनसक्छ । त्यसैले तत्काल उपचारमा जानुपर्छ । विशेषतः बालबच्चा र ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई चिसोबाट जोगाउनुपर्छ । र, निमोनियाको शंका लागेमा तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्था वा अस्पताल लैजानुपर्छ ।
Related Topics:Featuredइन डेफ्ट
स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम
इन डेफ्ट मासिक मंसिर २०७५ अंक